यी ८ गुण भएका युवतीहरु तपाईका लागि योग्य होइनन् »
मानिसहरुले आफ्नो विशेष साथी खोजिरहेका हुन्छन् । त्यही क्रममा उनीहरु प्रेम सम्बन्धमा पर्ने गर्छन् । धेरैले त्यही सम्बन्धलाई जीवनको अभिन्न अंगको अवस्थामा बदल्ने गर्छन् । अर्थात् विवाह गरेर युगौँयुग सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने वाचामा बाँधिन्छन् ।
हुन त हर कोहीको जीवनमा कुनै एक समय एक भावनात्मक सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ । तर हामीलाई अक्सर हामी कस्तो मानिससँग जोडिएका छौँ भन्ने कुराले सताउने गर्छ । किनकी कुनैपनि सम्बन्ध राम्रो हुन दुवैको समान भूमिका र जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । उही पुरानै उखानको याद आउँछ कि एक हातले ताली बज्दैन । र मानिस कस्तो मान्छेको साथमा बाँकी जीवनको सुनौलो कल्पना गर्दैछ भन्ने कुराले उसलाई बेलाबेलै गम्भीर बनाउने गर्छ ।
यद्यपि आजको विषय भनेको अहिले सम्म अक्सर यस्ता युवासँग सम्बन्ध जोड्नुस्, उस्तासँग सम्बन्ध तोड्नुस् जस्ता सुझावका आलेखहरु पढ्ने गरिएको छ । यहाँ केही यस्ता व्यवहारिक विषयहरु छन् जसले तपाइले कस्ता युवती छान्ने भन्ने केही टिप्सहरु दिन्छ । गुडम्यान प्रोजेक्टमा प्रकाशित केही यस्ता गुणको वर्णन गरिएको छ यदि यी गुणहरु तपाइको हुनेवाला जीवनसाथीसँग छैन भने विकल्प रोज्ने कि ? वा यो लेख पढ्न दिने पो हो कि ?
दीर्घकालीन सम्बन्धको बारेमा कुरा गरिरहँदा यदि दुवै जनामा कम्तिमा न्युनतम साझा लक्ष्य हुन आवश्यक छ । यदि तपाइ मेडिटेसन सेन्टर चलाउने योजनामा हुनुहुन्छ तर आफ्नो पार्टनरले चाँहि वियरको डिलर खोल्ने सोच बनाउँछ भने यसले सम्बन्धमा तित्तता जरुर पैदा गर्दछ । गम्भीर बन्नुस् किनकी जीवनका केही साधारण कुराहरु पनि मिल्न सकेन भने अलमल र दुःखदायी बन्नेछ । यदि यस्तो स्थिति छ भने यो जालोमा नफस्नुस् । जीवनको अन्त्य त्यतिखेर हुन्छ जब हामी रुपान्तरण वा परिवर्तन स्वीकार्दैनौँ । तर आफूले आफ्नो कमी कमजोरी पहिचान गरेर त्यसलाई सुधार्ने तर्फ ध्यान लगाएर जीवनको सुनौलो क्षितिज निर्माण गर्ने हामीसँग सँधै यो विकल्प बाँकि रहेको हुन्छ ।
सर्जक शिव अखेलीका एक पछि अर्को सिर्जना युट्युब ट्रेन्डिङ्गमा
कोरोना भाइरसबाट विश्वमा ५ करोड भन्दा बढी सङ्क्रमित, १२ लाख बढीको मृत्यु
स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन कर्मचारी युनियनको आग्रह